Badweyntimes.com » WAR CUSUB: Qaar kamid ah isgoysyada Muqdisho oo lagu Xeray Kaamiradaha ilaalada Amaanka…Badweyntimes.com
Wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa laga dhaqan geliyay kaamerooyinka ilaalada oo lagu xiray isgoysyo dhowr ah.
Isgoysyada Banadir, Zope, KM4, Dabka iyo Sayidka oo dhamaantood ka mida wadadda dheer ee Maka Almukarama ayaa xalay la dhameystiray laguna xiray Kaamerooyinka CCTV ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada wadooyinka.
Baallooyin hore looga dhisay Wadooyinka ayaa saaka dadweynuhu dareemeen inay ku xiran yihiin Kaamerooyinkaasi oo lagu soo beegay maalmo ka hor doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado inay dhacdo 8-da bishan Febraayo 2017.
Kaamerooyinka Wadooyinka ayaa loo adeegsada xoojinta ammaanka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa, laakiin waxaa ka muhiimsan in la helo dadkii ku shaqeyn lahaa iyo ciidamadii u diyaarsanaa inay daba galaan ama tallaabo degdeg ah qaadaan markii loo baahdo.
Waxaa hore magaalada Muqdisho looga hirgeliyay nalalka samaafarayaasha ee kala haga Gaadiidka, kuwaasoo markii dambe burburay iyadoo aan waxba laga qaban, waxaa kaloo qeybo badan oo ka mida howlgab noqdeen nalalkii wadooyinka oo aan wax dayactir ah lagu sameyn.
Dhageyso: Xasan sh, oo si yaab leh kaga hadlay Dhulka Dowlada ee laga iibiyay Hay’ado gaar ah….